वस्तु चयन गर्न, तीरसँग वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस्। एक भन्दा बढी वस्तु चयन गर्न वस्तुहरू वरिपरि चयन फ्रेम तान्नुहोस्। चयनमा वस्तु थप्न, Shift थिच्नुहोस्, र त्यसपछि वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चयन गरिएको वस्तुहरू group को रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ एकल समूह वस्तु।
तपाईं एक समूहको व्यक्तिगत तत्वहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं समूहबाट तत्त्वहरू CommandShift+click. बाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईले एकल समूहलाई डबल-क्लिक गरेर चयन गर्न सक्नुहुनेछ,यदि तपाईंले पहिले अक्षम गर्नुभयो पाठ सम्पादन गर्न डबल-क्लिक गर्नआइकनमाविकल्प भने Bar.
Title is: चयन